Redknapp Oo Is Casilay Iyo QPR Oo Tababare Cusub Raadinaysa
HomeWararka MaantaRedknapp Oo Is Casilay Iyo QPR Oo Tababare Cusub Raadinaysa
Harry Redknapp ayaa iska casilay oo ka tagey shaqadiisii tababarenimo ee naadiga QPR, sidaana waxaa daboolka ka qaaday maamulka sarre ee kooxda.
Khabiirkan 67 jirka ah , oo la joogey kooxda ka dhisan galbeedka caasimada London muddo laba sanno ka badan, ayaanay u suurto gallinin inuu kooxda ka dabiibo dhaawacii ku yimid xili ciyaareedkii 2012-2013 oo ay heerka labaad u daadegtay.
Si kastaba ha ahaatee, QPR ayaa fadhida kaalinta 19 aad ee kala saraynta horyaalka Premier League kadib 23 ciyaarood oo ay ciyaartay oo 11 kamid ah oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda guuldarro ka qabsatay xili ciyaareedkan, iyo iyaddoo kooxdu ku guuldaraysatay inay ciyaaryahana alla haka dhigee ka soo iibsato maalintii u dambeysay ee suuqa kala iibsiga xidiguhu xidhmayay, wuxuu naadigu website kiisa khaaska ah ku shaaciyey warka tagista ah ee Redknapp iyo iscasilaadiisa.
Warsaxaafadeed uu ku saxeexan yahay gudoomiye Tony Fernandes ayaa lagu yidhi: “Waxaan jeclahay inaan fursadan kaga faa’iidaysto u mahad celin aan uga mahad celinayo Harry hawl kasta oo uu u qabtay QPR mudaddii uu xilka hayay.
“Waxaanu ku kala tagnay weji furnaan iyo isfaham buuxa , shaqsiyana waxaan jeclahay inaan u rajeeyo mustaqbal fiican oo waara.”
Redknapp oo isna qoraal laga soo gudbiyey ayaa intaas ku daray: “Waxaan ku qaatay wakhti aad u heersareeya QPR. Waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo Gudoonka naadiga, Ciyaaryahanada iyo dhamaan shaqaalahaygii, iyo khaas ahaan taageerayaasha naadiga oo aniga qiimo gaar ah ii lahaa tan iyo maalintii aan kooxda ku soo biiray oon uga mahad celinayo taageeradoodii hiilka iyo hooyadaba lahayd.
“Anigoo ka murugoonaya, Waxaan gallaya qaliin degdeg ah oo dhaawac jilibka igaga yaala ah kaas ayaana soo afjaray shaqadii aan qaban lahaa todobaadyada soo socda oo dhan. Macneheedu waxaa weeye inaanan awoodin inaan subax kasta garoonka tababarka imaado, oo hadii aan karayo aan 100 kiiba boqol siin lahaa, Waxay ila tahay inay ku fiican tahay in qof kale shaqada halkii ka sii anba qaado.
“Xidhiidhka aniga iyo Tony Fernandes noo dhexeeyey wuxuu ahaa midka ugu fiican ee aan naadigaba ku xasuusan doono waxaanan kooxda u rajaynayaa guulo badan. Waxaan ku kalsoonahay inay ka badbaadi doonaan horyaalka Premier League Sanadkan.”
Chris Ramsey iyo Les Ferdinand ayaa isla markiiba lagu wareejiyey sii wadida shaqadii tababaraha ee naadiga koobaad tan iyo inta laga soo magacaabayo macalin cusub.
Xiddiga Saaxil Ee Mustafe-Messi Oo Ka Hadlay Guushii Xulkiisa, Waayihiisa Ciyaareed Iyo Rajada Mustaqbalka
31/10/2016 Abdiwahab Ahmed
Ligue 1 – PSG vs Lyon OL 2-0 – All Goals & Full Highlights
17/09/2017 Diiriye Ahmed
England Iyo Netherlands Oo Ciyaar U Ballamay
23/10/2015 Abdiwahab Ahmed